नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा वृद्धि, ३ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट | आर्थिक अभियान
नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा वृद्धि, ३ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
पुस २६, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १९ दशमलव ४३ अंकले बढेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७८४ दशमलव ९५ विन्दुमा पुगेको हो । कारोबारमा आएका २३६ ओटा धितोपत्रको १ करोड ४२ लाख ८८ हजार १३० कित्ता शेयर ७७ हजार १८३ पटकमा रू. ७ अर्ब १२ करोड ३४ लाख २४ हजार ३५ मा खरीदविक्री भएको छ ।
यो दिन ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भयो । अघिल्लो कारोबार दिन आइतवार भने ७ अर्ब १० करोडको कारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका ती धितोपत्रमध्ये तीन ओटा धितोपत्रको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत, युनियन हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९९ प्रतिशत र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
यो दिन मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य रू.२८५,युनियन हाइड्रोपावरको रू.३८५ दशमलव ३० र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य रू. ५०० दशमलव २० पुगेको हो ।
उता यो दिन प्रभु सेलेक्ट फण्डको इकाई मूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । फण्डको इकाई मूल्य प्रतिइकाई रू. ९ दशमलव १७ मा झरेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य २ दशमलव ९९ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४६० मा झरेको छ ।
सोमवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री गोर्खाज फाइनान्स भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २२ करोड ७७ लाख ४० हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८२९ कायम भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको रू. २१ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यो दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव १८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८२ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक बढेको छ ।
समूहगत परिसूचक बढ्नेमा सबैभन्दा बढी अन्य समूहको परिसूचक ५ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी व्यापार समूहको १ दशमलव ९१ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको शून्य दशलमव ७६ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको १ दशमलव ३ प्रतिशत,वित्त समूहको ३ दशमलव ३१ प्रतिशले बढेको छ ।
त्यसैगरी निर्जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ५२ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ४४ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको १ दशमलव ४१ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
बजारले गति लिने संकेतहरु आएकाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबैप्रकारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । जसका कारण पनि नेप्से परिसूचक केहिदिन यतादेखि वृद्धि हुँदै गएको हो ।